लाईफस्टाइल​ | Digital Dainik | Page 2
पढेको कुरा बिर्सने बानी छ ? यसरी पाउनुहोस छुटकरा !
पढेको कुरा बिर्सने बानी छ ? यसरी पाउनुहोस छुटकरा ! काठमाडौं, चैत्र १९ः धेरै विधार्थीहरुमा समस्या नै भनौं पढेको विर्सने बानी हुन्छ । यो समस्याले धेरैलाई सताईरहेको हुन्छ । पढेको कुरा एकछिनमा बिर्सने समस्याका कारण धेरै मेहेनत गर्ने विद्यार्थी पनि असफल भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । आखिर पढेको कुरा कसरी सम्झने त ? नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभएका र मनोबैज्ञानिकहरुको सहयोगमा हामीले तपाईंहरुलाई ७ टिप्स संकलन गरेका छौं । १.एकोहोरो पढेर मात्र हुँदैन । तपाई सिकिरहनुभएको कुरालाई पूरानो कुरासंग जोड्न सिक्नुहोस् । जसले तपाईंलाई दुवै कुराका बारेमा आवश्यक कुराहरु सम्झन सजिलो हुनेछ । पढेका कुराहरुलाई …
नियमित योग गर्नोस्, रोग भगाउनोस् बेनी, चैत १०: एघार वर्षदेखि दमका कारण सास्ती खेपेका बेनी नगरपालिका–२ का खड्गबहादुर थापाको स्वास्थ्यमा एकाएक परिवर्तन आएको छ । रोगका कारण घरमै बसेर बित्ने उनको दिनचर्यामा पनि अहिले परिवर्तन आएको छ । उहाँ निर्धक्क गाउँमा हिँडडुल गरिरहेको भेटिन्छन् । श्वासप्रश्वास प्रणालीमा उत्पन्न समस्याका कारण थलिएकी मङ्गलाघाटकी सुमित्रा पुन पनि रोगमुक्त हुनुभएको छ । थापा र पुन त्यत्तिकै ठीक हुनुभएको होइन, न त कुनै चिकित्सकले दिएको औषधि सेवन गरेर नै उहाँहरूले स्वास्थ्यलाभ गर्नुभएको हो । योग गरेर १५ दिनमै उनीहरूको स्वास्थ्यमा परिवर्तन आएको हो । दुई वर्षअघिदेखि योग …
यी महिलामा छ अनौठो क्षमता, सुँघेरै पत्ता लगाउछिन् क्यान्सर
यी महिलामा छ अनौठो क्षमता, सुँघेरै पत्ता लगाउछिन् क्यान्सर एजेन्सी, चैत्र ८: क्यान्सर लागेपछि बिरामीमा यो रोग अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेपछि मात्र पत्ता लागेको पाइन्छ, जसकारण उपचार असम्भव हुन्छ र बिरामीको मृत्यु हुन्छ । यसैको बाबजुत नेपालमा पनि बर्षेनी हजारौं ब्यक्तिहरु यसको सिकार भइरहेका छन् । तर एकजना यस्ती महिला फेला परेकी छिन् जसले कुनै मानिसलाई क्यान्सर भए नभएको कुरा सुँघेरै पत्ता लगाउन सक्छिन् । बेलायतको लण्डनमा बस्ने मेलोना नामकी करोडपति व्यापारी महिलामा यस्तो क्षमता छ । अत्तरको व्यवसाय गर्ने मेलोनाको व्यवसाय जस्तै सुँघ्ने क्षमता पनि अद्भुत छ । जसका कारण उनले आफ्नो व्यवसाय पनि गज्जबले अघि बढाउन सकेकी छिन् । …
लौ हेर्नुहोस्, प्लास्टिकको बोतलबाट बनेको गाँउ ?
लौ हेर्नुहोस्, प्लास्टिकको बोतलबाट बनेको गाँउ ? एजेन्सी । इट्टा ढुंगा र काठबाट बनेको घर त तपाइ, हामीले देखेकै छौं । तर के तपाइले प्लास्टिक बोतलबाट बनेको घर देख्नुभएको छ ? पक्कै पनि देख्नुभएको छैन् ? र प्लास्टिकको बोतलबाट घर बनेको सुन्दा पत्याउन पनि गाह्रो पर्छ । तर मध्य अमेरिकन देस पनामा प्लास्टिक बोतलबाट घर निर्माण भएको छ । बातावरणलाई दुषित पर्ने प्लास्टिक बोतललाई जम्मा गरेर एक गाउनै निर्माण गरिएको छ । बातावरणलाई दुषित हुनबाट रोक्न र पुरानो बोतललाई पुनः प्रयोगमा ल्याउने नयाँ उपाएको रुपमा यता घर निर्माण गरिएको एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । पनामाको ८३ एकड क्षेत्रमा फैलिएको प्लास्टिक बोतल भिलेजमा सामुदायिक …
डिप्रेसनबाट छुटकारा पाउन सुत्नुअघि भिज्योलाइजेसन
डिप्रेसनबाट छुटकारा पाउन सुत्नुअघि भिज्योलाइजेसन काठमाडौं, चैत्र ५ः तनावले शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रुपमा मानिसलाई असर पुर्याउँछ । तर, सही तरिकाबाट गरेको उपचार र परामर्शबाट डिप्रेशन पूर्ण रुपमा निको हुन सक्छ । यस्तो समस्या सबै उमेरका व्यक्तिहरुलाई हुन सक्छ । त्यसमध्ये पनि धेरै जसो युवा र महिलाहरु पीडित छन् । त्यसो त बालबालिका तथा प्रोढ उमेरका मानिस पनि डिप्रेशनबाट पीडित छन् । सामान्य देखिने डिप्रेशनले कहिलेकाहीँ मानिसलाई जटिल अवस्थामा पुर्याइदिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् १९९० मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार डिप्रेशन चौथो प्रमुख रोग भएको तथ्यको खुलासा गरेको थियो । अझ, सन् २०२० सम्म डिप्रेसन दोस्रो …
कर्मचारी खटाउन प्रजिअलाई थप अधिकार
कर्मचारी खटाउन प्रजिअलाई थप अधिकार काठमाडौँ, चैत ४: सरकारले जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई तत्कालका लागि खटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्लामा कार्यरत नेपाल प्रशासन, सामान्य प्रशासन, लेखा, इन्जिनियरिङ, शिक्षा र विविध सेवाका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई नगरपालिका, गाउँपालिका र अन्तर्गतका वडा कार्यालयमा काम गर्न खटाउने अधिकार प्रजिअलाई प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । बैठकले विश्व बैंकअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने रु १० अर्ब ७० करोड ऋण सहायता स्वीकार …
पानी पिउन अल्छी मिर्गौलालाई सास्ती काठमाडौँ, फागुन २५: ‘बाहिर त कहाँ पानी पिउनु पटकपटक शौचालय जानुपर्छ, मत घरमा मात्र पानी पिउँछु' यदि हामीमध्ये कसैले यस्तो खालको बानी अपनाएका छौँ भने ख्याल राखौँ आफूले आफ्नै मिर्गौला बिगार्दै छौँ । पछिल्लो समय आम्दानीका लागि विदेशिका युवाको मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि वर्षदिन नबित्दै स्वदेश फर्किनु परेको घटना सार्वजनिक हुन थालेको छ । जाँदा चिकित्सकको प्रतिवेदन राम्रो आएपनि खाडीमुलुकमा पुगेपछि त्यहाँ हुने जलवियोजनका कारण मिर्गौलामा समस्या देखिएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । खाडीमुलुकमा गएका युवा लामो समयसम्म काम गर्ने, आवश्यक मात्रामा पानी नपिउने र …
तनावमा हुनुहुन्छ यी तरिका अपनाउनुस्
तनावमा हुनुहुन्छ यी तरिका अपनाउनुस् काठमाडौँ: यदि तपाई आफैँलाई उपेक्षित महसुस गरिरहनुभएको छ या आफ्नो जीवनशैली तथा व्यवहार विस्तारै असामान्य बन्दैछ भने नआतिनुस् । त्यसको पनि समाधान गर्न सकिन्छ । अहिलेको विश्व प्रगतिले विश्वभर बस्ने मानिसहरुमा यस किसिमको समस्था उत्पन्न भएको हुन्छ । मानसिक तनावबाट छुटकारा पाउन तपाई आफूले नै केहि प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी यहाँ तपाई गर्नुपर्ने त्यस्ता प्रयासहरुको बारेमा चर्चा गर्दछौँ । सर्वप्रथम त तपाई आफैँले सधै सकारात्मक कुरामा जोड दिनुपर्छ । अरुको विचार तपाईसँग नमिल्न सक्छ त्यसो भन्दैमा अरुको विचार नै ठिक होइन भन्ने निस्कर्ष निकाल्नु हुँदैन । अरुको …
सामाजिक सञ्जालको नियमित प्रयोग मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो
सामाजिक सञ्जालको नियमित प्रयोग मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो सामाजिक सञ्जालको नियमित प्रयोग मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने हालै अष्ट्रेलियामा भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र मानिसको तनाव, चिन्ता र खुसीबीचको सम्बन्धका बारेमा अध्ययन गर्दा यस्तो भेटिएको हो । युनिभर्सिटी अफ मेलवर्न र मोनास युनिभर्सिटीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालले एक अर्कालाई सम्पर्कमा रहिरहन सहयोग गरेकाले मानसिक तनाव कम गराएको हुन सक्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । नकारात्मक सन्देशहरु पनि लेखिने प्रत्यक्ष रुपमा वार्ता गर्न नसक्नेको लागि पनि सामाजिक सञ्जालले राम्रो गरेको जनाएको छ । ‘सामाजिक …